SIDA LOO SAMEEYO BUUL A AH FOR DUCKS DO-IT-ADIGA: QALABKA, SIZE, PHOTOS - BEERAHA DIGAAGA
Nest for najaaxi guri ku samee naftaada
Ducks canuga wuxuu noqon karaa shaqo faa'iido leh: hilibkoodu waa mid dhadhan fiican leh oo aan lahayn dufan, waxay leeyihiin digaag heer sare ah oo leh dareenka horumarinta ee horumaray. Waxa ugu muhiimsan waa in shimbiruhu leeyihiin buul dabacsan, iyo sida loo sameeyo oo loo qalabeeyo, aynu eegno maqaalkani.
Shuruudaha daboolka ah ee guud
Fure u noqoshada guuleysiga waa inuu u hoggaansamaa dhowr arrimood oo muhiim u ah suurtagalnimada soo qaadista,
Goobta waa in ay ka baxdaa aragga, oo leh iftiin daaqsiin ah, aamusnaan (meel fog oo laga sii daayo);
dhererka hoose ee hareeraha geeska si uu u sii hayo suurta galka inuu ka yimaado ukunta;
Ma taqaanaa? Dadka Marie waxay leeyihiin caan caruur ah. Shimbirta waxaa loo tixgeliyaa waalidka adduunka: waxay ahayd, sida ay caan ku tahay caqiidada caanka ah, waxay noqotay xaaskii ilaahyada qorraxda, Ukko, waxay dhigeen ukunta-Earth.
masaafo ama kala qaybsanaan u dhexeeya hudheelka, si aan shimbiraha u muujin gardarrada midba midka kale;
Qoyaanka qashinka qashinka;
lakabka walxaha qashinka aan ka yarayn 20 cm;
Sida loo sameeyo boodhka loogu talagalay ducks
Naqshadeynta buulkeena waxay u egtahay qaabka sanduuqa laymanka, waxaa loogu talagalay saddex digaag.
Baro sida loo sameeyo cayayaanka digaagga oo leh ukunta godka.
Wixii soo saarid ayaa u baahan doona:
xayawaan alwaax ah - 4 nooc. 120 cm dheer, 4 pcs. 55cm kasta, 4 pc. 40 cm;
roulette iyo qalin.
Cabbirku wuxuu noqon doonaa mid caadi ah, marka laga reebo ballaarinta, lagu xisaabiyo saddex meelood:
dhererka - 40 cm;
qoto dheer - 55 cm.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo sameeyo balli ku yaal goob loogu talagalay berriga iyo shimbiraha, iyo sidoo kale sidii loo dhisi lahaa barniga for ducks gacantaada.
Nidaamka wax soosaarka waa sida soo socota:
Waxaan ka dhignaa afar bannaan oo ka soo duuban warqad tufaax ah: sare, hoose, dhabarka iyo derbiga hore oo leh cabbir ah 40x120x55 cm.
Marka xigta, u diyaar garow laba bannaan oo dhinacyada dhismaha ah iyo laba ka mid ah qaybaha gudaha ee leh cabbir ah 40x40x55 cm.
Laga soo bilaabo jeexjeexyada alwaax soo ururiyaan shaxanka, oo lagu dhejiyey nalka.
Marka la diyaarinayo darbiga hore, waxaan ku wareegeynaa wareegga albaabka leh qalin, waxaan sameynaa saddexda goobood oo midba midka kale ka dhexeeya.
Iska yaree albaabka.
Waxaan soo aruurinnaa dhammaan meelaha banaan, iyada oo saldhig u ah saldhigyada, oo ka dhigaysa midka sare.
Gudaha waxaan u kala qaybinaa saddex buul oo isku mid ah oo kala qaybiya qaybaha.
Si loogu fududeeyo beddelidda qashinka iyo nadiifinta buulshada mustaqbalka, daboolka sare ayaa laga samayn karaa mobile iyada oo lagu xoojinayo qalabka guriga.
Video: sida loo sameeyo boodhka for ducks
Hay waxaa lagu talinayaa sidii qashin ah: waxaa, xataa si fiican u qalajiyey, si dhaqso ah u ururiyaan qoyaanka ee hooska. Peat waxay noqon kartaa xalka ugu wanaagsan ee qashinka ah: waa qoyaan u adkaysta, sidoo kale waxa uu leeyahay awood u leh inuu nuugo ur. Maqnaanshaha qalabkaas oo kale ku haboon caws ama balka.
Lakabka qashinka xagaaga waa inuu ahaadaa ugu yaraan 20 sentimitir dhererka, xilliga jiilaalka waa in la kordhiyo ilaa 30 cm.
Waxaan ku talineynaa in aan akhrino inta jeer ee uu nuugu ku fadhiyo ukumaha si uu u qabsado, inta uu nuugo cuno ka hor inta aan la gawrynin iyo sida loo xoqo naaska, sababtoo ah xayawaanku waxay ku foorarsadaan biyaha, sida si habboon loogu xoqdo boogaha duurjoogta, cudurada ay halis u yihiin ducks.
Xaqiiqdii buulkuna waa inaanu si toos ah uga soo horjeedin soo galitaanka: marka hore, waa qabyo; Marka labaad, dareenka iyo maqal la'aanta. Shimbiraha inta lagu jiro xilliga xaddidaadda waxay u baahan yihiin nabad iyo xasillooni, ma jecla dareenka xad-dhaafka ah iyo fuss, waxay ka bixi karaan ukunta. Sidaa darteed, meeshan waa inaan sidoo kale ku dhajin meel u dhow feederiyeyaasha iyo meelaha nasashada ee dadka intiisa kale ee guriga deggan. Waa inay noqotaa gees la ilaaliyo oo leh iftiin kala firdhisan, xasilloon oo aan cakirneyn.
Waa muhiim! Darbiyada qoyan iyo kuwa qoyan waxay ku adkeyn karaan inay doortaan meel aad u dillaacdo, markaa ka hor inta aadan guriga dhisin, ku diirso gudaha gudaha iyo dibedda, ka saarista qoyaan kasta.
Sida loo baro nuugida buulka
Qodobka koowaad ee tababarka guusha ee buulkani waa qalabkiisa ka hor bilowga baaluqnimada dadka. Kadibna waxaad kicin kartaa ukumaha adigoo ku siinaya nooc ka mid ah ukunta. Waxaad ku dhigi kartaa ukun dabiiciga ah, adoo beddelaya kuwa cusub marba mar. Haddii duck uu xiiseynayo goobta, waxa uu bilaabi doonaa inuu qalabeeyo, kuleylkiisa uu ku dhajiyo fluff.
Tirada ugu wanaagsan ee buulada
Haddii aad leedahay tiro balaadhan, tirada buul-yari lama huraan in la tiriyo: inta badan hal ka mid ah saddexda midood ayaa noqonaya hen. Laakiin, talada khabiirada takhasuska leh, meel gooni ah oo gaar ah ayaa loogu talagalay lakabka kasta. Haddii ay tahay guri wayn oo meelo badan ah, mid kasta oo ka mid ah waa in ay kala tagaan qayb ahaan. Haddii kuwani ay yihiin meelo kala duwan oo hal meel ah, markaa waxay u baahan yihiin inay ku yaallaan meel fog oo midba midka kale ka mid ah, maadaama ay shimbiraha isku rogi karaan oo isku xiri karaan.
Waa muhiim! InInta lagu jiro xilliga guga, waa suurtagal in la oggolaado in ducklings horay loo shubay si ay u haboon tahay buulka. Hooyadu waxay ka bixi kartaa ukumaheeda waxayna bilaabi kartaa inay kor u qaaddo oo daryeelto ducklings.
Habka Kormeerka Nest
Kormeerka buulka iyo nadiifintiisa waxay bilaabaneysaa laba toddobaad kadib marka ay muuqato muuqaalka. Kama samayn kartid kormeer inta uu nuuggu jiro: waa inuusan arkeynin sida aad u taabatey dabka, haddii kale way tuuri kartaa. Xilliga marmarka qaarkood waxay u baahan tahay in ay cunta, cabto oo socoto - ka dibna habka loo fuliyo. Imtixaankaas, waxay ka saaraan wasakh, mid aan joogto ahayn, ukunta dillaacday, nadiifinta qashin-qubka, bedelida daaha hore. Waa in la calaamadiyo dhammaan ukumaha soo haray: ducks mararka qaarkood waxay caruurtooda u tuuraan farcanka qof kale. Haddii ay jiraan calaamado, dadka kale waa la kala qaadi karaa oo la qaadi karaa.
Ma taqaanaa? In farshaxanka Shiinaha ee shui shui, laba sawir oo ducks mandarin ah ayaa soo jiidan doona farxad iyo jecel yahay guriga.
Gebogebo: marka ducks duurjoogta, waa muhiim in la xasuusto in shimbiraha ay ku dhacaan xaalado aan caafimaad lahayn, qoyaan iyo buuq. Qaylada ayaa keeni kara shimbiraha si ay u walwalaan walbahaarka - tani waa in loo tixgeliyaa maaha marka la barbardhigo, laakiin sidoo kale guriga laftiisa. Si joogto ah ayaa loo baahan yahay in lagu beddelo gogosha iyo jeermiska.